Madaxweynaha Soomaaliya oo booqday xerada qaxootiga Dhadhaab - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeMadaxweynaha Soomaaliya oo booqday xerada qaxootiga Dhadhaab
June 6, 2016 Abdi Omar Bile Home, Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta duhurkii gaaray xerada qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kiinya halkaas oo ay ku noolyihiin qaxooti badan oo Soomaali ah.
Waxaa madaxweynaha halkaas kusoo dhaweeyay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kiinya iyo saraakiil kale oo dalkaas ah.
Madaxweyne Xasan ayaa booqashadiisa la xiriirtaa sidii uu wax uga ogaan lahaa xaalada qaxootigaas Soomaaliyeed oo muddo ku dhow 25 sanno halkaas ku noolaa.
Dowlada Kiinya ayaa sheegtay in ay xirayso xeryaha qaxootiga ee kuyaala dalkeeda kuwaas oo ay ku jiraan qaxootiyaal badan.
Xasan ayaa noqonaya Madaxweynihii u horeeyay burburka kadib oo Soomaali ah oo xeryahaas booqda ay kunoolyihiin qaxooti Soomaaliyeed oo gaaraya ilaa iyo 300,000.
Dhadhaab waa xerada qaxootiga ugu weyn Caalamka oo ay kunoolyihiin dad lagu qiyaasay ilaa 500,000 qaxooti ah oo u badan Soomaali kuwaas oo ka barakacay colaadaha dalkooda ka dhacay.
Soomaaliya oo qorshaynaysa lacag rasmiya oo ay leedahay in ay daabacdo bilowga sanadka soo socda
Garowe-(Puntland Mirror) At least two Puntland soldiers wounded after they exchanged gunfire with pirates who hijacked commercial vessel in Alula district of Bari region earlier this week, an official said Mowlid Hassan, an officer within Puntland [...]